Kuye kwafuneka siphile umzuzu ozukileyo kwindawo apho amacandelo ahlukeneyo, iinkqubo, abadlali, iintsingiselo kunye nezixhobo ziguqulelwa kumsebenzisi wokugqibela. Imfuno kwibala leGeo-engineering namhlanje kukuba nezisombululo nge...
Asithengisi ngenyani isoftware, sithengisa iziphumo zesoftware. Abantu abasihlawulisi isoftware, basihlawulela oko kwenzayo ukukhula kweBentley kuye kwavela ubukhulu becala ngokufunyanwa. Zimbini kulo nyaka...
Inkqubela phambili ye-BIM-Isishwankathelo seNkomfa yoNyaka
Ukuqhubela phambili ekumiselweni komgangatho we-Building Information Modeling (BIM) ibe ngumxholo onqamlezileyo weNkomfa yeZiseko zoNyaka, ebanjwe ngo-Oktobha eSingapore. Nangona iakhawunti yam ye-Twitter yabiwa ngokuphandle nge…
Khawufane ucinge ukuba uneseti yezicwangciso ezingama-45, ezinebhokisi okanye iimodyuli ezikuLwayo ezithwele ulwazi olunxulunyaniswa netheyibhile kwi-Microsoft Office, njengenombolo yeshiti, evunyiweyo, umhla wokuvunywa, njl. Kwaye kufuneka ufake utshintsho kwi…
2 tricks ne Microstation: Repair ezonakeleyo iifayile kunye neengxaki DWG 3D
Ingxaki 1. Ifayile ye-DGW ye-3D ivula njengokungathi i-2 dimensional kuphela Kuqhelekile ukuba xa uvula ifayile ye-3D kwifomathi ye-DWG kunye ne-Microstation, ivula ngokungathi inemilinganiselo emi-2 kuphela. Oku kwenzeka ngenxa yokuba...
Yaphula password VBA Microstation Macro
IVisual Basic for Applications luthotho lwamathala eencwadi awathi uMicrosoft awenza afumaneke, aphelelwe lixesha kodwa anamandla kakhulu, ngakumbi kwiinguqulelo zeOfisi ngaphambi kuka-2010. Nangona isaqhubeka ukubakho, uphuhliso oluninzi luyenziwa...
Ushicilelo lweMicrostation CONNECT-Kuya kufuneka siziqhelanise nojongano olutsha
Kwi-CONNECT edition ye-Microstation, eyasungulwa kwi-2015 kwaye igqitywe kulo nyaka we-2016, i-Microstation iguqula i-interface yayo yendabuko yeemenyu zecala nge-bar menu bar uhlobo lwe-Microsoft Office. Siyazi ukuba olu tshintsho luzisa iziphumo zalo…
Lo ngumngeni oqhelekileyo kwiiprojekthi ezininzi zeCadastre okanye zeCartography, ezithi kwixesha le-2000-2010 lidibanise i-Microstation Geographics njengenjini yedatha yendawo, ngokuqwalasela izizathu ezifana nezi zilandelayo: Ulawulo lwe-Arc-node kwaye luqhubeka lusebenza ngokugqithiseleyo, ngenxa...
Guqula idatha yendawo ekwi-Intanethi!
I-MyGeodata yinkonzo emangalisayo ye-intanethi apho kunokwenzeka ukuguqula idatha ye-geospatial, kunye ne-CAD eyahlukeneyo, i-GIS kunye nefomathi ye-Raster, kwindlela yokubonisa kunye nereferensi. Ukwenza oku, kufuneka ulayishe ifayile, okanye ubonise...
Zoba polygon in Microstation evela Excel
Ukusebenzisa le template, i-traverse ingatsalwa kwi-Microstation, ukusuka kuluhlu lweebheringi kunye nemigama kwi-Excel, okanye uluhlu lwezilungelelaniso x, y, z. Ityala loku-1: Uluhlu lweeBearings kunye nemida Masithi sine...
Kule nqaku siza kubona indlela yokuvula, umxholo kunye nokubhala ifayile ye-shp usebenzisa i-Microstation V8i, iphinda isebenze ne-Bentley Map. Ngaphandle kwento yokuba ziifayile ze-16-bit zakudala, zindala njengezinye-ezininzi- zeenwele zam ezingwevu, akunakuphepheka ukuba ziqhubeke zisetyenziswa…
Amafu eNdawo kunye nokuNgqamanisa neMaphu zikaGoogle - 5 Yintoni eNtsha kwiMicrostation V8i
Ithuba lokusebenzisana neGoogle Maps kunye neGoogle Earth kunye nokulawula idatha evela kwiiskena zezinye zezinto ezilindelekileyo ezingxamisekileyo kuyo nayiphi na inkqubo ye-GIS - CAD. Kule miba, akukho mntu uthandabuzayo ukuba isoftware yasimahla ihambele phambili...
I-Google Earth iye yaba sisixhobo esingenakuthintelwa kwiinkqubo zethu zangoku ze-cartographic. Nangona inemida yayo kwaye ngenxa yokulula kwayo ugqweso oluninzi luchazwa yonke imihla, sisityala esi sixhobo sokuba i-geolocation kunye…
iingxaki Microstation e 8.5 7 Windows
Abo banethemba lokusebenzisa i-Microstation 8.5 namhlanje kufuneka babhenele kwi-Windows XP koomatshini obubonakalayo ngenxa yokungahambelani ne-Windows 7, kubi kakhulu kwi-bits ye-64. Bakhankanya ingxaki ngomhleli wombhalo, esele ndithethe ngawo ngaphambi kokuba uyisombulule njani kwaye...
Isiguquli sasimahla kwi-Intanethi kwi-GIS-CAD kunye nedatha yeRaster
I-MyGeodata Converter yinkonzo ye-Intanethi eyenza kube lula kuthi ukuguqula idatha phakathi kweefomathi ezahlukeneyo. Okwangoku inkonzo iqaphela iifomati zevector yegalelo ezingama-22: ESRI Shapefile Arc/Info Binary Coverage Arc/Info .E00 (ASCII) Coverage Microstation DGN (Version 7)…